Widevine inomira kushanda pane 32-bit Linux masisitimu | Linux Vakapindwa muropa
Makore mashoma kana maviri apfuura ini ndakatenga Raspberry Pi 4. Ini ndakazviitira kuyedza uye kuishandisa sebhokisi remultimedia, pakati pezvimwe zvinhu. Raspbian, ikozvino Raspberry Pi OS, ini handina kumboifarira saka ndine SD kadhi ine Manjaro ARM. Iyo desktop desktop inoshanda zvakanyanya kwandiri, asi pane chimwe chinhu chandisingakwanise kuita nemazvo: Widevine haina kutsigirwa zviri pamutemo saka ndinofanirwa kushandisa mudziyo weChromium uyo usingape yakanakisa vhidhiyo / odhiyo mhando. Ini ndinomirira nemoyo murefu uye ndinotsvaga ruzivo nguva nenguva kuti ndione kana Google yarova bhatani, uye yairova, asi kwete iyo yandaitarisira.
Ndakangoverenga chinyorwa chinochitsanangura: DRM zvemukati yamira kushanda pa32-bit Linux masisitimu anoshanda. Izvo zvese mabhurawuza anoenderana anoshandisa iyo yambotaurwa Widevine, kubva kuGoogle, uye ndiyo kambani inozivikanwa neinjini yayo yekutsvaga iyo inosarudza kuti ndiani uye kupi software yacho ingashandiswa Kubva May 31, ikozvino anopfuura mwedzi wapfuura, haichakwanise kushandiswa pa32-bit Linux, uye ini kana ini sosi yekutanga hatina kukwanisa kuongorora kana ichishanda paWindows neyakavakwa zvakafanana.
Widevine inotibvumidza kutamba zvirimo DRM, asi kwete pa x86 kana aarch64
Chii zvemukati zvinoshandisa DRM? Kutarisa YouTube kana Pluto.tv hatidi izvozvo. Ose masevhisi anotsigirwa-kushambadzirwa, saka ivo vakaita semahara-kumhepo TV uye zvirimo hazvina kuchengetedzwa. Izvo zvinopihwa neNetflix, Spotify kana Amazon Prime Vhidhiyo ndeye, semuenzaniso, uye aya ndiwo masevhisi asingachagone kutambwa pamakomputa makumi matatu nemasere kana pasina munhu anoita chero chinhu kuti agadzirise.
Semunhu asisina chero 32-bit, ini ndinongoda kufunga kuti Google iri kutarisa kumberi, uye kuti isu tichakurumidza kuona kuti inobaya sei bhatani, kuve yakanangana, iyo inobvumidza Widevine kushanda pasina hunyengeri pane desktop masisitimu ruoko. Asi chokwadi ndechekuti kuchine vazhinji vachiri kuenderera ne32-bit komputa uye ndivo avo, nechikonzero chakanaka, vasiri kufunga chero chinhu chakanaka nezveGoogle izvozvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Patinoda kuzivisa kuti zvemukati zve DRM zvinogona kutotambwa muARM, chatinofanirwa kuita kutaura kuti haichashandi mu32-bit
WINE 6.12 inotanga kuita iyo Network Chitoro Chinongedzo uye inounza inopfuura mazana matatu neshanduko